TCP Art Simulation-TCP Art Simulation-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Tilmaaminta Farshaxanka TCP
Number Model: Tilmaaminta Farshaxanka TCP
Mashiinka sibidhka ee sibidh-dhiska ee loo yaqaan 'TCP' (sibidhka sibidhka ee sibidhka lagu dhisayo) (sheyga sibidhka tooska ah ee sibidhka) waa shey dhismooyin aad u balaaran. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo dhagaxyo balaastig ah oo dabiici ah oo kala duwan, badar alwaax, bamboo, iwm. Goobta. Waxay ku leedahay saami aad u weyn jardiinooyinka mawduuca iyo xitaa warshadaha muuqaalka dhirta. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa inta badan mashruucyada gawaarida ee adduunka, sida Disney, Universal Studios, iwm. Teknolojiyaddu waxay gaar ahaan ku habboon tahay jawiga jawiga adag ee dibadda ah oo leh dhaqan mawduuc gaar ah.
TCP waxaa si toos ah loogu sawirayaa sibidh qaas ah, oo badanaa loo adeegsado dhagax-tuurka iyo dhagaxa lagu daydo oo leh qaabab adag.
Iftiiminka Jumlada ah Muuqaalkiisa gaarka ahi waa 1 / 3- 1/4 ee dhagaxa dabiiciga ah, looma baahna taageero dheeri ah oo aasaaska gidaarka.
[Waara] Waxaa lagu daaweeyaa teknolojiyadda biyuhu ka samaysan tahay biyuhu, ma fududa in boodhka la xajiyo. Waxaa loo nadiifin karaa sidii wax cusub oo dayactir la'aan ah kadib marka ay ku maydho dabaysha iyo roobka.
[Rakibaadda waa mid fudud oo kharash-ku-jaban] Si toos ah ayaa loo dhejin karaa iyada oo aan gidaarka lagu soo jiidin. Qiimaha rakibaadda waa kaliya 1/3 ka mid ah dhagaxa dabiiciga ah.
Midabka "deggan oo hodan ah" midab leh oo leh midabbo la soo dejiyay ayaa xaqiijinaya xasillooni waarta ee midab, iska caabin ururin, aashito iyo alkali iska caabin ah, midab midab leh oo ku yaal dusha sare ee dhagaxa, midabka muuqda iyo dhir, noocyo kala duwan oo midab leh, oo la jaan qaada noocyo kala duwan oo dhagax caag ah, dareenka hore iyo kuwa kale ee xiisaha leh ee darbiga bannaanka.
Saamaynta Wormhole GRC